सल्यानमा बामगठबन्धनका उम्मेदवार यस्ता छन् « Tulsipur Khabar
सल्यानमा बामगठबन्धनका उम्मेदवार यस्ता छन्
प्रदेश नं. ६ को मुख्य मन्त्रीका रुपमा ज्वालाको चर्चा
बुद्धि पुन, सल्यान १५ कार्तिक । करिब तीन साता देखी उम्मेदवारी छनोटमा ब्यक्त रहेका एमाले माओबादी गठबन्धनका नेताहरुले उम्मेदवारी टुङ्ग्याएका छन् । मनोनयन दर्ता गर्ने दिन आउन केही दिन बाँकी रहदा मात्रै उनीहरुले उम्मेदवारहरुको टुङगो लगाएका हुन् । सल्यानमा एमाले र माओवादीले सिट भागबन्डा गरेका छन् ।
सुरुमा एमाले र माओवादी दुवै दलले प्रतिनिधिसभामा दावी गरेपछि विवादित बनेको सल्यानमा अन्नतः प्रतिनिधिसभा माओवादी र प्रदेशसभा (क) र (ख) दुवै एमालेले लिने गरी सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । एउटा मात्रै क्षेत्र रहेको प्रतिनिधिसभामा माओवादीले विनाविभागीय मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यका लागि एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वाला र सल्यान जिल्ला ईन्चार्ज गुलावजंग शाह गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको एमालेका एक नेताले बताए । एमालेका ज्वालाले पहिले नै प्रदेशसभामा दावी गरेका थिए भने शाहले यस अघि प्रतिनिधिसभाका लागि दावी गरि रहेका थिए ।
अब ज्वाला प्रदेशसभा (क) र शाह प्रदेशसभा (ख) बाट उम्मेद्वार बन्ने छन् । ज्वाला यस अगाडीका चुनावमा २०५६ सालमा सल्यान क्षेत्र नं. १ र २०७० सालमा क्षेत्र नं. २ मा भारी मतका साथ विजयी भएका थिए । यसैबीच प्रकाश ज्वाला नै प्रदेशसभाका लागि चुनाव लड्ने भएपछि प्रदेश नं. ६ को मुख्य मन्त्रीका रुपमा लिइएको छ ।
एमालेका तर्फबाट ज्वाला नै मुख्यमन्त्रीको मुख्य दावेदार हुने एमाले स्रोतको भनाइ छ । यस्तै सुर्खेत क्षेत्र नं. २ (क)को उम्मेदवारी घोषणा गरिएका यामलाल कंडेललाई यस अघि नै प्रदेश नं. ६ को मुख्य मन्त्रीको दावेदारका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।